Hotel Caana Muqdisho oo Mareexan & Murusadahii ugu Badnaa la dajiyay yaa dajiyay Xog? – War La Helaa Talo La Helaa
Shaaciye.com- Aqoonyahanada iyo waxgaradka Muqdisho ayaa hadal haayo dad kayimid qurbaha una dhashay Beelaha Mareexan iyo Murusade wax Xilana ka heyn Dowladda Fedaraalka oo la dajiyay Hoteelka ugu qaalisan Magaalada Muqdisho ee Hotel Jazeera dad badan ayaay layaab ku noqotay in shaqsiyaad qurbaha ka yimid kuna heyb ah Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaare Khayre buux dhaafiyeen Hoteelkaasi.
Xubnahaan la dajiyay Hotel Jazeera oo ku yaala nawaaxiga Garoonka Muqdisho ayaa u badan shaqsiyaadkii mucaaradi Jiray Madaxweynayaashi Dalka soo Maray sida Madaxweynahii Hore DKMG Sheekh Sariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynahii Hore Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo xiligaasi qaab qabyaaladaysan ku mucaaradi jiray.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo R/wasaare Xasan Cali Khayre oo mar walbo ku cel celiya in aay ladagaalamayaan Musuq maasuqa, ayaa hantida shacabka ka dhaxaysay ee Qaranka iyo Canshuurta Shacabka Muqdisho ku baxinaya shaqsiyaad ku heyb ah dajiyayna Hoteelada ugu qaalisan.
Shaqsiyaadkaan la dajiyay Hotel Jazeera oo u badan Beesha Mareexan ee uu ka soo jeedo Farmaajo ayaa weli wada dayaacadii markii qurbaha joogeen iyaga oo ku cel celinaya mar walba in Siyaad Barre Kadib Hada dalka Dowlad yeeshay sidoo kale Madaxdii dalka soo martay ku tilmaamaya in ahaayeen shaqsiyaad aan Dowladnimada wax ka aqoon.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo doorasho ka dhacday Magaalada Muqdisho xilka kula wareegay ayaa qudhiisa aaminsan in Dalka wax Dowladda laheyn Siyaad Barre kadib isaga oo qudbadahiisa mar walbo ku laalo wixii isaga kahor soo qabsoomay.